Manana safidy ny zanak'olombelona - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-04 > Manana safidy ny olombelona
Raha ny fahitana ny olombelona dia matetika no tsy mahazo an'izao tontolo izao ny heriny sy ny sitrapony. Matetika loatra ny olona dia mampiasa ny heriny hifehezana ary mametraka ny sitrapony amin'ny hafa. Ho an'ny zanak'olombelona rehetra, ny herin'ny hazofijaliana dia hevitra hafahafa sy hadalana. Ny fihevitry ny fahefana laika dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny Kristiana ary hiteraka fandikana diso ny soratra masina sy ny hafatry ny filazantsara.
“Izany no tsara sy ankasitrahana eo anatrehan’Andriamanitra, Mpamonjy antsika, Izay maniry ny hamonjena ny olona rehetra sy ny ho tonga amin’ny fahalalana ny marina” (Isa.1. Timoty 2,3-4). Ireo andinin-teny ireo dia mety hitarika ny olona hino fa Andriamanitra dia mahery indrindra ary satria te hamonjy ny olona rehetra izy, dia tsy maintsy manaraka azy izy ireo. Hampiasa ny heriny sy ny sitrapony amin’ny fomba izay hanerena azy ireo ho amin’ny fahasambaran’izy ireo izy ary noho izany dia hampiharina ny famonjena ho an’izao rehetra izao. Tsy izany anefa no toetran’Andriamanitra!
Na dia mahery indrindra aza Andriamanitra, ny heriny sy ny sitrapony dia tsy maintsy takatra amin’ny toe-javatra misy ny fetra napetraky ny tenany. Manomboka amin’ny Genesisy ka hatramin’ny Apokalypsy, hatramin’i Adama sy Eva ka hatramin’ny fitsarana farany, dia misy foto-kevitra iray ao amin’ny Baiboly izay manambara ny sitrapon’Andriamanitra momba ny famonjena, ary koa ny fahafahana nomen’Andriamanitra ny olombelona mba hanohitra izany sitrapony izany. Hatrany am-piandohana, ny olombelona dia nanana safidy na hanaiky na handa izay tian’Andriamanitra. Nambaran’Andriamanitra tamin’i Adama sy Eva ny sitrapony, rehefa nilaza hoe: “Jehovah Andriamanitra nandidy ny olona hoe: Ny hazo rehetra eo amin’ny saha dia azonao ihinanana, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin’ny andro ihinananao azy dia tsy maintsy ho faty ianao» (1. Mosesy 2,16-17). Nipoitra ny raharaha satria nanana fahalalahana handa ny baikony sy hanao izay tiany izy ireo. Ny olombelona dia niaina tamin'ny vokatry izany safidy izany hatramin'izay. Tamin’ny andron’i Mosesy, ny Isiraely dia nampirisihina hankatò ny sitrapon’Andriamanitra, fa ny safidy dia azy ireo: “Alaiko ny lanitra sy ny tany ho vavolombelona anio; ary ho velona anie ianao sy ny taranakao »(5. Mosesy 30,19).
Tamin’ny andron’i Josoa dia nomena safidy malalaka hafa koa ny Isiraely: “Fa raha tsy mety manompo an’i Jehovah ianareo, dia fidio anio izay hotompoinareo: ny andriamanitra izay notompoin’ny razanareo tany an-dafin’ny ony, na ny andriamanitry ny Amorita tany an-dafin’ny ony. izay firenena onenanao. Fa izaho sy ny ankohonako kosa te hanompo an’i Jehovah » (Josoa 24,15). Ireo fanapahan-kevitra ireo dia manan-danja amin'izao andro izao ary ny olombelona dia afaka misafidy ny handeha amin'ny lalany, hanaraka ny andriamaniny ary hisafidy na handa ny fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Tsy manizingizina ny fitandremana Andriamanitra.
Faly Andriamanitra ary sitrak'Andriamanitra ny hamonjy ny olona rehetra, nefa tsy misy terena hanaiky ny tolotra nataony. Malalaka isika milaza hoe "eny" na "tsia" amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanamafisana fa misy ny famonjena amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy amin'ny ankapobeny dia tsy fanatontoloana. Vaovao tsara ho an'ny olona rehetra ny filazantsara.
by Eddie Marsh